10 युरोपमा सबै भन्दा सुन्दर दृष्टिकोण | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा युरोप > 10 युरोपमा सबै भन्दा सुन्दर दृष्टिकोण
पढ्ने समय:6मिनेट(Last Updated On: 13/11/2020)
लामा हरियो घाटीहरू, महलों, र सुरम्य गाउँहरु, युरोप छ धेरै आश्चर्यजनक ठाउँहरू भ्रमण गर्न. प्रत्येक र प्रत्येक एकल स्थानले तपाईंलाई महसुस गराउनेछ कि तपाईंले भाइहरूमा प्रवेश गर्नुभयो’ Grimm काल्पनिक, र 10 युरोपका सबै सुन्दर दृश्यहरू एक परिकल्पनाका लागि उत्तम सेटिंग छन्.
1. फ्रान्स मा सबै भन्दा राम्रो दृश्य: डोर्डोग्ने उपत्यका
हरियो पहाडहरू, तेजस्वी Dordogne नदी, र5प्राप्त आश्चर्यजनक गाउँहरु “फ्रान्स मा सबै भन्दा सुन्दर गाउँ” award make the Dordogne valley’s one of the beautiful views in Europe. Castelnaud is one of the most charming castles in France, कालो पेरिगर्ड गाउँको क्षेत्रमा अवस्थित छ. डोर्डोग्ने उपत्यकाका गाउँहरू समय द्वारा अछुतिएका छन्, र तपाईं पथ र सडकहरूमा टहलिरहँदा, तपाईले महसुस गर्नुहुनेछ कि तपाईले समयमा नाइट्स र किंवदन्ती समयहरूमा यात्रा गर्नुभएको छ.
फ्रान्स मा सबै भन्दा राम्रो दृश्य हो रेल पहुँच. तपाई बोर्डोबाट कम ट्रेनमा यात्रा गर्न सक्नुहुनेछ2घण्टा, वा पेरिस भन्दा कममा6घण्टा. यो मनमोहक क्षेत्र पूर्ण रूपमा एक दिनको यात्रा भन्दा बढी लायक छ.
Nantes को बोर्डो ट्रेन मूल्यहरु
पेरिस बाट बोर्डो ट्रेन मूल्यहरु
लियोनलाई बोर्डो ट्रेन मूल्यहरू
मार्सिलेजलाई बोर्डो ट्रेन मूल्यहरू
2. Vernazza, Cinque टेरे पर्वतारोहण ट्रेल
Cinque Terre मा सुरम्य गाउँ Vernazza दृश्य एक हो 10 युरोपमा सबै भन्दा सुन्दर दृश्य. यो रंगीन गाउँ मध्ये एक हो5आश्चर्यजनक गाउँहरु, Cinque Terre को अद्भुत क्षेत्र समावेश. निलो मूल भू-मध्य सागरको पृष्ठभूमिमा सुन्दर घरहरू, चित्रकला जस्तो दृश्य सिर्जना गर्नुहोस्, विशेष गरी सूर्यास्तमा आश्चर्यजनक.
तपाइँ सिन्क टेरेबाट यस भव्य दृश्यको प्रशंसा गर्न सक्नुहुन्छ पैदल यात्रा निशान सबैलाई जोड्ने दृष्टिकोण5गाउँमा. जब तपाईं ट्रेल बढ्नुहुन्छ, तपाईंले दाखबारीहरू देख्नुहुनेछ, माछा मार्ने डु boats्गा, र यसको सबै वैभवमा Cinque Terre. यो उत्तम छ Cinque Terre मा जानुहोस् वसन्त र शरद sinceतु मा गर्मी मा मौसम हाइकिंग को लागी एकदम आर्द्र हुन्छ, र जाडोमा ट्रेल अवरुद्ध हुन सक्छ.
कर्नीगलियादेखि वर्नाज्जा ट्रेन मूल्यहरू
फ्लोरेन्स लाई Vernazza ट्रेन मूल्यहरु
Bologna to Vernazza ट्रेन मूल्यहरु
Riomaggiore to Vernazza ट्रेन मूल्यहरु
3. स्विजरल्याण्डको सबैभन्दा दृश्य दृश्य: रोचेर्स डी नाये
स्विजरल्याण्डको विचार धेरै फिल्म र कलाकारहरु लाई प्रेरित गरेको छ, र जब तपाईं रोचर डी नाय र भौद क्षेत्र भ्रमण गर्नुहुन्छ, तपाईं किन बुझ्नुहुनेछ. धेरै जसो यात्रीहरूले मालाटेरिक्स पर्वत शिखर चढ्छन्, त्यहाँ वास्तवमा रोशेर-डी-नायेबाट एक धेरै लुकाउन दृश्य छ.
त्यहाँ एकपटक तपाईं ताल जेनेभा र हिउँको चुचुरोमा हेर्नुहुनेछ स्विस आल्प्स नेपथ्यमा. रोचर-डी-नायेको यो सुन्दर दृश्य सूर्यास्त वा पिकनिकको लागि उपयुक्त छ यदि तपाईं बिहान सबेरै पैदल यात्रामा उत्सुक हुनुहुन्छ।.
जिनेभा ट्रेन मूल्यहरूमा ल्योन एयरपोर्ट
जेनेभा ट्रेन मूल्यहरु लाई Lucerne
4. मुलरथल क्षेत्र
Mullerthal Region has the loveliest views in Luxembourg. Rocky formations, झरनाहरु, र हरियो ट्रेल्स छनौट गर्न को लागी, यो एक पैदल यात्रा स्वर्ग हो. मुलरथललाई अक्सर सानो स्विट्जरल्याण्डको रूपमा चिनिन्छ, यसको अद्भुत परिदृश्य को लागी धन्यवाद.
लक्जमबर्गमा सब भन्दा सुन्दर दृश्य अपर-श्योर प्रकृति पार्कमा नदी सुअर हो. तपाईं यो उत्साहजनक ठाउँलाई पैदल यात्रा गरेर आनन्द लिन सक्नुहुन्छ मुलरथेल ट्रेल मार्ग 1. यस पैदल यात्रा ट्रेलले हरियो घासका मैदानसँगै लिन्छ, ट्यूडर महल, यसलाई एक बनाउँदै 10 युरोपमा सबै भन्दा सुन्दर दृष्टिकोण.
5. चेक गणराज्यको सबैभन्दा सुन्दर दृष्टिकोण: मोराभियन टस्कनी
रेशम जस्तै हरियो रोलिंग क्षेत्र, चेक गणराज्यको मोराभिया क्षेत्र मनमोहक छ. गर्मीमा हरियो, blooming, र वसन्त मा रंगीन, मोराभियन टस्कनीको रंगहरू बर्षको asonsतुहरूमा परिवर्तन हुन्छन्. त्यसैले, कुनै पनि समय तपाईं मोराभिया को यात्रा, तपाइँ टस्कनीको जुम्ल्याहाको पूर्ण भिन्न दृष्टिकोण प्राप्त गर्नुहुनेछ.
युरोपको यो आश्चर्यजनक दृश्य प्रागबाट एक दिन यात्रा हो. सार्डिसका दर्शनीय गाउँहरू, र कर्लिन र मोराभ, मोराभियन क्षेत्रहरूको सर्वश्रेष्ठ विचार प्रस्ताव.
6. अस्ट्रिया, Alpbach
हिउँले ढाकिएको पहाडहरूको पृष्ठभूमिमा काठको फार्महाउसहरू, Alpbach गाउँ राम्रो छ. Alpbach को सानो सुरम्य गाउँ अस्ट्रिया को एक आश्चर्यजनक क्षेत्रहरु मा एक मा अवस्थित छ: टायरोल. आश्चर्यजनक झरनाहरू, अनुभवी हाइकर्स वा बच्चाहरूसहित परिवारहरूको लागि पैदल यात्रा, अष्ट्रियन परिदृश्य र प्रकृति अन्वेषण गर्न धेरै तरिकाहरू छन्.
साथै, तपाईं अस्ट्रियाको न्यानो तालहरू डुबाउन सक्नुहुन्छ, जुन यो प्राकृतिक गाउँको नजिक पनि भेट्टाइन्छ. अस्ट्रियामा Alpbach को सबै भन्दा सुन्दर दृश्य एक छोटो छ रेल सवारी एयरपोर्टबाट टाढा.
भियना ल्याण्डेक इस्चगल ट्रेन मूल्यहरू
म्यूनिखदेखि ल्यान्डेक इस्चगल ट्रेन मूल्यहरू
साल्जबर्ग देखि ल्यान्डेक इश्गल ट्रेन मूल्यहरू
ज्यूरिखदेखि ल्यान्डेक इश्गल ट्रेन मूल्यहरू
7. जर्मनीको सबैभन्दा सुन्दर दृष्टिकोण: neuschwanstein क्यासल
युरोपको सबैभन्दा लुभावनापूर्ण दृष्टिकोणको सूची महलको दृश्य बिना पूरा हुँदैन. जर्मनी मा Neuschwanstein महल छ सबैभन्दा प्रभावशाली महल जर्मनी मा र यूरोप मा सबै भन्दा जादुई दृश्य को एक प्रस्ताव गर्दछ.
Neuschwanstein महल को सबै भन्दा लोकप्रिय दृष्टिकोण मैरी पुल बाट हो. तथापि, यो निकै भीडले भरिन्छ र प्रख्यात दृष्टिकोणबाट तस्वीर तान्न लगभग असम्भव छ. त्यसैले, तपाईं पहाडमा चढाई र मारीनब्रुक दृष्टिकोणबाट अगाडि बढ्नु पर्छ. जर्मनीमा सब भन्दा सुन्दर दृश्य एक zig-zag सडक माथि छ, फ्यान्स्ड प्लेटफर्मबाट.
8. नेदरल्यान्ड्स, जानस्ताद गाउँ
हल्याण्ड यसको ट्युलिप र पवन चक्कीका लागि प्रसिद्ध छ, नहरहरुमा, र आकर्षक शहरहरु. त्यसैले, यो अचम्म मान्नुपर्दैन कि नेदरल्याण्डको सबैभन्दा सुन्दर दृश्य दुबैमा छ. यदि तपाईं वसन्तमा यात्रा गर्न को लागी भाग्यशाली हुनुहुन्छ, तपाईंले जानस्टड गाउँ जानुपर्नेछ. यहाँ तपाई इन्द्रेणीका सबै र colors्गमा फूलो ट्यूलिपहरूको साथ सक्रिय पवन चक्कीहरू भेट्टाउनुहुनेछ.
9. हंगेरीको सबैभन्दा सुन्दर दृष्टिकोण: जेलरबर्ग हिल बुडापेस्टमा
हंगेरीको संसदको दृश्य बुडापेस्टको सबैभन्दा प्रसिद्ध छविहरू मध्ये एक हो. तपाईं जेलरबर्ग हिलबाट यो उत्साहजनक दृश्य स्नैप गर्न सक्नुहुन्छ. मा 235 एम, तपाईं डेन्यूब नदी र बुडापेस्टको लुभावना दृश्य हेर्न सक्षम हुनुहुनेछ.
सुन्तला सूर्यास्त रंगहरूमा, रातको बत्ती, वा स्पष्ट नीलो आकाश दिन मा, विचार अद्भुत छन्. यसरी, जेलरबर्ग हिलको दृष्टिकोणले हाम्रो लागि बनाएको छ 10 युरोपमा सबै भन्दा सुन्दर दृष्टिकोण.
10. डाइनन्टमा चाटेउ डि क्रेभकोईर
दिनन्तको दर्शनीय गाउँ यूरोपमा सब भन्दा मनमोहक र अनौंठो गाउँ हो. दिनन्तको सबैभन्दा सुन्दर दृश्य, चर्च, नदी, र म्यूसे उपत्यका चाटेउ डे क्रेभकोईरबाट आएको हो, हार्टब्रेक दरबार.
चूना ढुstone्गा चट्टानी परिदृश्य प्रभुत्व, यो प्रभावशाली महलले १ant औं शताब्दी देखि डायनान्टलाई हेरे.
ब्रसेल्स डाइनन्ट ट्रेन मूल्यहरू
को 10 युरोपमा सबै भन्दा सुन्दर दृश्यहरु हरियो पहाडहरु माथि छ, जहाँ केवल साहसी सपना देख्ने हिम्मत गर्छ. सबैभन्दा विशेष, युरोपेली दृष्टिकोणले असाधारणको लागि हेर्नेहरूको लागि कुर्दै छन्, अफ-द पिट गरिएको-पथ ठाउँहरू, र भीडबाट टाढा.
यहाँ मा एक ट्रेन सेव, हामी तपाइँलाई तपाइँको छुट्टीको योजना बनाउन सहयोग गर्न खुसी हुनेछौं 10 रेलमार्फत युरोपका सबै भन्दा सुन्दर दृश्यहरू.
के तपाईं हाम्रो ब्लग पोष्ट ईम्बेड गर्न चाहानुहुन्छ “युरोपमा १० अति सुन्दर दृष्टिकोणहरू” तपाईंको साइटमा? तपाईं या त लिन हाम्रो फोटो र पाठ र हामीलाई क्रेडिट लिंक संग यो ब्लग पोस्ट. वा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmost-beautiful-viewpoints-europe%2F اور- (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
तपाईं अंग्रेजी अवतरण पृष्ठ को लागि हाम्रो लिंक भित्र, तर हामी पनि छ https://www.saveatrain.com/ja_routes_sitemap.xml, र तपाईं / RU गर्न / fr वा / डे र अधिक भाषा परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ.
BeuatifulViewpoints BreathtakingViews EuropeByTrain रेल यात्रा TravelingbyTrain दृष्टिकोण
ट्रेन यात्रा, रेल यात्रा चेक गणतन्त्र, ट्रेन यात्रा फ्रान्स, ट्रेन यात्रा जर्मनी, ट्रेन यात्रा हंगेरी, ट्रेन यात्रा इटाली, ट्रेन यात्रा स्विजरल्याण्ड, यात्रा युरोप